Tilmaamo qaar ka mid ah isticmaalka mashiinka calaamadeynta laser
Awoodda weynaata, ayaa sii weynaata soosaarka tamarta leysarka, iyo si ka sii fudud astaamaha calaamadeynta. Si kastaba ha noqotee, awoodda wax soo saarka waa in lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo maaddadeeda. Maaha in awoodda sare, ay sii fiicnaato, illaa iyo inta ay ka soo bixi karto shuruudaheeda, iyo mishiin ka hoos shaqeeya h ...Akhri wax dheeraad ah »
Codsiga Mashiinka Calaamadaha Laser ee warshadaha khamriga
Taariikhda hore ee khamriga ee qadiimiga ah waxaa dib loogu laaban karaa Mesobotamiya xilligii Neolithic Age 10,000 BC. Xilligii Neolithic-ka qiyaastii 9,000 sano ka hor, hadhuudh iyo miro ayaa loo isticmaali jiray in lagu sameeyo khamri. Masaaridii hore iyo isla muddadaas labada gobolka Webi, miro iyo shaciir ...Akhri wax dheeraad ah »
Nidaamka hawlgalka caadiga ah ee mashiinka goynta laser
Mashiinka goynta leysku waa qalab muhiim u ah soosaarida birta xaashida. Isticmaalka saxda ah ee mashiinka goynta leysku sidoo kale waa shuruud muhiim u ah hagaajinta nolosha adeegyadeeda. Sidaa darteed, ka dib iibsiga mashiinka, waa inaan xakameynaa mashiinka mashiinka caadiga ah iyo midka caadiga ah ...Akhri wax dheeraad ah »
Saamaynta saamaynta saxnaanta goynta laser-ka
Saxnaanta goynta ayaa ah cunsurka ugu horeeya ee xukuma tayada mashiinka goynta leysarka. Aan kuu faahfaahiyo afarta arrimood ee waaweyn ee saameynaya saxnaanta goynta mashiinnada goynta leysarka: 1.Qaddarka isu geynta hoose ee matoorrada leysarka: Haddii barta nalka ay aad u yar tahay ka dib isu soo ururinta, gooynta ...Akhri wax dheeraad ah »
Codsiga tiknoolajiyada calaamadeynta laser ee warshadaha baakadaha
Mashiinnada laser-ka laser-ga ee calaamadeynta laser-ka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha baakadaha. Hadda, tikniyoolajiyadda leysarka ayaa si bisil loogu dabaqay warshadaha baakadaha. Tusaale ahaan, sigaarka kartoonka ama baakadaha sigaarka ee loo isticmaalo maareynta iibka waxaa lagu calaamadeeyay lambarro laba-cabbir leh, boorsooyinka caafimaadka ayaa mar ...Akhri wax dheeraad ah »
Saamaynta cudurka faafa ee taajka cusub
Cudurka faafa ee dibada ayaa sii qulqulaya, qiimaha alaabta ceyriinka ah iyo xamuulka badaha ayaa cirka isku shareeray, silsiladda saadka ee caalamiga ahina waxay wajaheysaa tijaabooyin daran, taasoo u horseedeysa shirkadaha ganacsiga shisheeye ee Shiinaha inay la kulmaan dhibaatooyin dibadeed oo aan horay loo arag. Xaaladda adag ee ganacsiga shisheeye ...Akhri wax dheeraad ah »